ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်နေ့သို့ ပေးပို့သော ဗီဒီယို ဖိုင် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မြောက်ပိုင်းဒေသ မှ အရိုးတွန်သံများ (အပိုင်း ၆ အောင်မိုးဝင်း)
Politics became “Dirty” when mixed with Religion »
This entry was posted on January 25, 2012 at 3:07 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
3 Responses to “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်နေ့သို့ ပေးပို့သော ဗီဒီယို ဖိုင်”
January 25, 2012 at 7:08 am | Reply
“သွေးတူခြင်းထက် စိတ်ကူးတူခြင်း ရှေးဟောင်းနှောင်းခေတ်တွင် ဒိုးတူဘောင်ဘက် ပြုဖူးသည်များကို မှတ်မိခြင်းတို့က အမျိုးသားစိတ်ကို ပိုမိုဖန်တီးလေသည်။” ဗိုလ်ချုပ်၏ လူမျိုးရေးရာသဘောထားအမြင် (ဒီးဒုတ်သတင်းစာ ဧက ဒသမတွဲ နံပါတ် ၄၁ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်၊ ၁၉၃၅၊ စာမျက်နှာ ၅၊ ၆)
January 25, 2012 at 7:09 am | Reply
ဆရာကြီးဦးရာဇတ်ဟာအမျိုးသား​ရေးစိတ် အင်မတန်မှ ဖြုစင်ပြီးတော့ ကျွန်မတို့လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှုအတွက် တက်နိုင်သမျှ ကူညီစောင်မပေးသွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ပါ။ လူမျိုးဘာသာမရွေးဘဲနဲ ဘာသာခွဲ ရယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ မထားဘဲနဲ့ အားလုးံဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် စုပေါင်းပြီးတော့ လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလိုရင် ဘယ့်လောက်ထိအောင်မြင်နိုင်သ​လဲဆိုတာ ဆရာကြီးဦးရာဇတ်က ကိုယ်တိုင်နေထိုင်ပြီးတော့ ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ DASSK
January 25, 2012 at 7:18 am | Reply
http://www.aungsan.com/ ….AND …